विश्वभर कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २ लाख नजिक - Khabarshala विश्वभर कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २ लाख नजिक - Khabarshala
विश्वभर कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २ लाख नजिक
विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या करिब २ लाख पुगेको छ। हालसम्म विश्वक २७ लाख बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्याङ्कअनुसार विहीबारसम्म विश्वमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या १ लाख ९० हजार ६ सय ५४ रहेको छ। बिहीबारसम्म नै विश्वमा २७ लाख १८ हजार ६ सय ९९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ।
हालसम्म कूल संक्रमतिमध्ये ७ लाख ४५ हजार ६ सय २० जना उपचारपछि निको भइ अस्पतालबाट घर फर्केका छन्। अहिले विश्वका विभिन्न अस्पताल र घरमै बसी कोरोना भाइरसको उपचार गरिरहनेको संख्या १७ लाख ८२ हजार ४ सय २५ रहेको छ। उपचारतमध्ये ५८ हजार ६ सय ७८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ भने १७ लाख २३ हजार ७ सय ४७ जनाको अवस्था सामान्य छ।
नेपालमा हालसम्म ४८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पाइएको छ। यीमध्ये ९ जना उपचारपछि निको भइ घर फर्किसकेका छन् भने ३९ जनाको उपचार चलिरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो बिरामी गत माघ ९ गते देखिएका थिए।
विश्वमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस सन् २०१९ डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको उहानमा देखिएको थियो। त्यसपछि यो भाइरस अहिलेसम्म विश्वका २ सय १० देश तथा क्षेत्रमा फैलिसकेको छ।
कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकामा देखिएको छ। अमेरिकामा हालसम्म ८ लाख ८० हजार २ सय ४ जनाका कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये ४९ हजार ८ सय ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
स्पेनमा कोरोना भाइरसका संक्रमित २ लाख १३ हजार २४ जना रहेकोमा २२ हजार १ सय ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इटालीमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ लाख ८९ हजार ९ सय ७३ पुगेको छ। यीमध्ये २५ हजार ५ सय ४९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
फ्रान्समा कोरोनाका संक्रमितको संख्या १ लाख ५८ हजार १ सय ८३ रहेको छ र २१ हजार ८ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा संक्रमितको संख्या १ लाख ५३ हजार १ सय २९ पुगेको छ, जसमध्ये ५ हजार ५ सय ७५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
बेलायतमा १ लाख ३८ हजार ७८ जना कोरोना भाइरस संक्रमित पुगेकोमा १८ हजार ७ सय ३८ जनाको मृत्यु भएको छ। टर्कीमा १ लाख १ हजार ७ सय ९० जना कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यीमध्ये २ हजार ४ सय ९१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
इरानमा ८७ हजार २६ कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेकोमा हालसम्म ५ हजार ४ सय ८१ जनाको मृत्यु भएको छ। चीनमा ८२ हजार ८ सय ४ कोरोना भाइरसका संक्रमित पुगेको छन्, जसमध्ये ४ हजार ६ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ।
रुसमा ६२ हजार ७ सय ७३ जना कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पुगेको छ। यीमध्ये ५ सय ५५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका संक्रमित ५० हजार ३६ जना रहेकोमा ३ हजार ३ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ। बेल्जियममा ४२ हजार ७ सय ९७ जना कोरोना संक्रमित संख्या पुगेको छ। यीमध्ये ६ हजार ४ सय ९० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण क्यानडामा २ हजार १ सय ४७, नेदरल्याण्ड्समा ४ हजार १ सय ७७, स्वीट्जरल्याण्डमा १ हजार ५ सय ४९, स्वीडेनमा २ हजार २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालमा थप जाेखिमयुक्त नयाँ दुई भेरियन्ट भेटिए, सजग रहन मन्त्रालयकाे अनुराेध
प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टका लागि डेढ करोड बजेट
कोभिड भ्याक्सिनका लागि यसरी अनलाइनबाटै फारम भर्नुस
सिडिओ साप ! मेरी आमा दमको रोगी हुनुहुन्छ , म कहाँ जाउँ अक्सिजन लिन ?
अक्सिजन प्लान्टका लागि तुलसीपुर उधाेग वाणिज्य संघकाे ४ लाख सहयाेग
विवाद मिलाउन एमालेले बनायाे कार्यदल गठन, को-को परे ?
दाङ्गमा जेठ १५ सम्म लकडाउन थपियो
ओली आजै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै, सपथग्रहण भोलि
Designed by : Prashamsha Devkota